Zviga zvebvumirano - Sendfiles.online
Nekuwana webhusaiti iyi paWhatsApp. Ukasabvuma w
Mvumo inopihwa kukopa kwechinguvana kopi imwe yemidziyo (ruzivo kana software) pane webhusaiti Sendfiles.online kune yega, isiri yekutengeserana transitory yekuona chete. Uku ndiko kupihwa rezinesi, kwete kwekutamisa zita, uye pasi t
kuyedza kuora kana kudzoreredza mainjiniya chero software iri pane ino tumira Sendfiles.online;
Reisensi iyi ichagumisa otomatiki kana ukatyora chero chipi zvacho chinotadzisa izvi uye inogona kugumiswa neTumfiles.online chero nguva. Kana wabvisa kuona kwako izvi, kana pamusoro pekudzima kweisensi iyi, unofanirwa kuparadza chero
3. Kuchengetedza Policy
Sendfiles.online inochengetera mafaera makumi mana nemasere. Panguva iyo mafaira anobviswa. Iyo mafaira akabatana nekero yeemail iyo yakavaisa. Kana email yakapinda kutumirwa izvo zvakare zvakachengetwa. Kana mafaira akatumirwa kupi kubva kune anoshandisa Pro, mazwi akasiyana anoshanda uye anozoratidzwa pane yekurodha peji peji.
Izvo zvigadzirwa zviri pa Sendfiles.online webhusaiti zvinopihwa pane 'sezvazviri' nheyo. Sendfiles.online haigadzi waranti, inotsanangurwa kana kutaurwa, uye nokudaro inoregedza uye inoregedza zvimwe zviwaridzo zvese zvinosanganisira, pasina muganho, zvichinzi warranties kana condi
Kupfuurirazve, Sendfiles.online haigoveri kana kuita chero chinomiririra maererano nekujeka, zvingangoitika zvichazoitika, kana kuvimbika kwekushandiswa kwezvinhu izvo zviri pawebhusaiti yake kana zvimwe zvine chekuita nezvezvinhu zvakadaro kana pane chero saiti yakabatana nesainzi.
Hapana chiitiko chinofanira kutumirwa. Sendline.
6. Kurongeka kwezvinhu
Izvo zvinoshandiswa zvinowoneka paSavefiles.online webhusaiti inogona kusanganisira technical, typographical, kana mifananidzo yekukanganisa. Sendfiles.online haina waranti yekuti chero zvigadzirwa zviri pawebhusaiti yayo zvakarurama, zvakakwana kana zviripo. Sendfiles.online may m
Sendfiles.online haina kuongorora rese resaiti rakabatana newebhusaiti uye haina chekuita nezvirimo mune chero akadai saiti yakabatana. Iko kusanganiswa kweiyo chero chinongedzo hazvireve kubvumirana ne Sendfiles.online yenzvimbo. Kushandiswa kwe chero rakabatana newebhu
Sendfiles.online inogona kugadzirisa aya ebasa webhusaiti yayo chero nguva pasina ziviso. Nekushandisa iyi webhusaiti iwe uri kubvuma kusungwa neiyo yazvino vhezheni yeiyi mazwi ebasa.
9. Mutemo Unotonga
Aya magama nemamiriro ezvinhu anotongwa uye anonongedzwa zvinoenderana nemitemo yeConnecticut uye iwe unozvipembedza zvisizvo mukutonga kwematare edzimhosva mune iyo Nyika kana nzvimbo.
© 2021 Sendfiles.online v1.15 | 75,267 mafaera akatumirwa kubvira 2020